Taliyihii Ciidanka Danab oo ka Baxsadey Xabsiga Dowladda Federaalka - Awdinle Online
Taliyihii Ciidanka Danab oo ka Baxsadey Xabsiga Dowladda Federaalka
December, 26, 2019 (AO) – Taliyihii Ciidanka Gaarka ah ee Kumaandoosta Danab ee Dowladda Federalka Soomaaliya G/le Jeeniqaar Sheikh Cumar ayaa lagu arkay maanta isagoo si xor ah u jooga magaaladda Garoowe ee Gobalka Nugaal.
G/le Jeeniqaar ayaa kasoo muuqday kaamerada warbaahinta ka dib markii uu ka dagay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, isaga iyo wafdi isugu jiray siyaasiyiin iyo xildhibaano heer federaal ah.
Lama oga goorta uu xoriyadiisa dib u helay, Maalmo ka hor ayay ahayd markii xarigiisa uu dood ka dhex dhaliyay xubno ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya ee kasoo jeeda Puntland iyo taliyaha ciiddanka xoogga dalka, General Odowaa Yuusuf Raage.
G/le Jeeniqaar ayaa loo xiray dayacaad masuuliyadii lagu aaminay, sida uu horey u sheegay taliyaha ciidanka xoogga, waxaana ku dhacay ganaax iskugu jiray xarig iyo shaqo ka farriisin.
Lama shaacin dayacaada uu sameeyay, in kastoo warar horey loola wadaagey warbaahinta ay sheegayeen in qalab ciidan ay la goosteen qaar kamid ah ciidamadiisii ilaalada u ahaa.
Previous articleWeerar Gaadmo ah oo Caawa ka dhacay Dhuusamareeb
Next articleAskari shan kun Shillin Somali u diley wiil kalluumeysato ah:- (Sawiro)